တက်ကသိုလျ နှဈတဈရာပွညျ့နလေ့ေးမှာ တက်ကသိုလျဘဝက အမှတျတရနဲ့ ပရိသတျတှေ မသိသေးတဲ့ သူမရဲ့ဘဝဖွတျသနျးမှုတှကေို ဖှငျ့ခလြာခဲ့တဲ့ သံသာဝငျး – Askstyle
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် သံသာဝင်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ အနဂ္ဂနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သမီးလေးတစ်ဦးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ သံသာဝင်းကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်နေးသူပါ.။ နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့ မှာတော့ သံသာဝင်းက “ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်ပွဲတဲ့…ဒီတက္ကသိုလ်ကြီး နဲ့ ကျွန်မ ပက်သက်မှုအကြောင်းတွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိလိုက်တော့….အမှတ်တရတွေက တကယ်ကို များစွာ..,,နည်းနည်းတော့ ရှည်ပါမယ်နော်
ကျွန်မက..အဲ့…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ( Main ) ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ဝန်းကြီးထဲမှာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော် တိုင်အောင် ပညာသင်ယူ အချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်….!!ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေ RC2 ထဲကို ကျွန်မ စရောက်တာ (၁၉၉၄ – ၉၅) ခုနှစ်…ရူပဗေဒ အထူးပြုနဲ့ ပထမနှစ်,ဒုတိယနှစ် အတန်းတွေကို (၂) နှစ်တာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး..ဂုဏ်ထူးတန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်..။ အဲဒါကြောင့် (၁၉၉၆) ပညာသင်နှစ်မှာ ကျွန်မသိပ်သွားချင်တဲ့..ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်( Main ) ဝန်းထဲကို စတင်ခြေချ ပညာသင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်..။အဲ့ဒီမှာ ဂုဏ်ထူးတန်း ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ်နဲ့ တတိယနှစ်ထိ ဆက်တိုက် တက်ပီး (၂၀၀၀) ပြည့်နှစ်မှာကျောင်းပြီးလို့ (၂၀၀၁)ခုနှစ်မှာ B.Sc ( Honours ) ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီကမှတဆင့် (၂၀၀၂)ခုနှစ် မှာ မဟာသိပ္ပံ Master တန်း ပထမနှစ်နဲ့ ဒုတိယနှစ် ကိုဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်.. ။(၂၀၀၃) ခုနှစ်မှာ တော့ M.Sc (Engineering) ဘွဲ့ကို ထပ်မံယူခဲ့ပါတယ်.. အဲဒါကနေ မကျေနပ်သေး သုတသနပြုဖို့ အမှတ်မှီလို့ မဟာသုတေသန Research တန်းကို နောက်ထပ် တစ်နှစ်ထပ်တက်ပါတယ် .. ။(၂၀၀၄) ခုနှစ် မှာတော့ M.Res ဘွဲ့ကိုထပ်ရခဲ့ပါတယ်… အဲ့မှာတင် ရပ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမဲ့ မိသားစုကကော သူငယ်ချင်းတွေကပါ ပါရဂူဘွဲ့ ဆက်ယူဖို့ အခွင့်အရေးရှိတုန်း ဆက်တက်ပါလားလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းကြပါတယ်.. နောက်ထပ် (၅ ) နှစ်ကြီးများတောင် ထပ်တက်ရမှာကို တွေးကြည့်မိတော့ … အသက်(၅) နှစ် မူကြိုထဲက စတက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်း ဒီအသက်အရွယ်ထိ သင်လို့ပဲမကုန်နိုင် တက်လို့မပီးနိုင်ဆိုပြီး ချီတုံချတုံနဲ့ အခါခါစဉ်းစားခဲ့မိပါတယ်… ။
နောက်ဆုံးတော့ ပါရဂူကြို preliminary တန်းကို (၂၀၀၄) ကနေ (၂၀၀၅) ထိ ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်.. ။ အဲ့တနှစ်ပီးတာနဲ့ နောက်ထပ် (၄) နှစ်တာ ကာလကတော့…ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးထဲမှာပဲ ဆက်လက် ပျော်ပျော်ကြီးပါပဲ.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ အတန်းတွေတက် ..lab တွေဝင် ..Seminar တွေတက်..Defense တွေထိုင် ..
project တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ..နောက်ဆုံးတော့ …(၂၀၀၉) ခုနှစ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ Ph.Dကိုရရှိခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီ့နေ့ကတော့ ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးနေ့တွေထဲက တနေ့ပါပဲ သူငယ်ချင်းတွေကိုဆို ကျမအမြဲ စ နောက်ပီးပြောလေ့ရှိပါတယ် ..PhD သာ တကယ်ပြီးခဲ့ရင် အဲ့နေ့ကျ ငါတကယ် ဂျွမ်းထိုးမှာလို့ ..စာတွေထပ်သင် ကျောင်းတွေထပ်သွားစရာမလိုဘူး လွတ်ပီကျွတ်ပီဆိုပြီး….တကယ်တမ်းရခဲ့တော့လည်း ဂျွမ်းထိုးဖို့မေ့သွားခဲ့ပါတယ် အချိန်တွေကြာလွန်းလို့ ..ကျောင်းဆိုရင် အသံတောင်မကြားချင်တော့လောက်အောင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ အခုတော့လည်း လွမ်းမိပြန်တာပါပဲလေ… ။
အထူးသဖြင့်..ကျွန်မတို့ရဲ့ physics ဆောင်ရှေ့ နဲ့သစ်ပုတ်ပင်ကြီး..ဘွဲ့တွေအခါခါယူရလို့ ကံကောင်းစွာနဲ့ ခဏခဏ ဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ convocation hall..copy တွေ ဆွဲရလွန်းလို့ အခါခါသွားခဲ့ရတဲ့ Library ဘေးလမ်းက copy ဆိုင်…ဒူးတုန်တုန်နဲ့ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာကြီးဒေါက်တာစိန်ထွန်းရုံးခန်းရှေ့.. နဲ့ Theartre အခန်း..သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အားတိုင်း အမြဲထိုင်နေကြ chemistry ဆောင်ရှေ့က လမင်းစားသောက်ဆိုင်နဲ့ သိပ္ပံ canteen..နာမည်ကြီးလို့ သွားလျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်ကိုင်းလမ်း..
လမ်းဘယ်တော့မှ ဆင်းမလျှောက်ဖြစ်ပဲ ကားနဲ့သာ မောင်းဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိပတိလမ်းအများကြီးပါ….စဉ်းစားကြည့်တော့ လှိုင်နယ်မြေမှာ (၂) နှစ်..ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တခုထဲမှာတင်(၁၃) နှစ်..ကျွန်မရဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝက စုစုပေါင်း (၁၅) နှစ် အဲ့တော့ အမှတ်ရစရာ အကြောင်းတရားတွေလည်း များစွာ များစွာ…..ကျေးဇူးတရားတွေလည်း များစွာ…သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားခဲ့တဲ့….ဒီတက္ကသိုလ်ကြီး …. အခုတော့ နှစ်တရာတိုင်ခဲ့ပြီ..။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်တည်တံ့အဓွန့်ရှည်ပြီး.. နိုင်ငံကိုအကျိုးပြု နိုင်ငံကအားထားရမဲ့ နောင်မျိုးဆက် ပညာတတ်သားကောင်းသမီးတွေ အများကြီး ဆက်လက်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ ကျေးဇူးတင်ဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active Worldပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိ်ုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။
Source: Than Thar Win’s Facebook
“တက်ကသိုလျ နှဈတဈရာပွညျ့နလေ့ေးမှာ တက်ကသိုလျဘဝက အမှတျတရနဲ့ ပရိသတျတှေ မသိသေးတဲ့ သူမရဲ့ဘဝဖွတျသနျးမှုတှကေို ဖှငျ့ခလြာခဲ့တဲ့ သံသာဝငျး”
Cele Active World ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော သံသာဝငျးကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ အနဂ်ဂနဲ့ အိမျထောငျကပြွီး သမီးလေးတဈဦးနဲ့အတူ ပြျောရှငျဖှယျ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူ သံသာဝငျးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျခွငျးမရှိတော့ဘဲ ဘဝကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျနေးသူပါ.။ နိုဝငျဘာလ (၃၀)ရကျနေ့ မှာတော့ သံသာဝငျးက “ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ရာပွညျ့ပှဲတဲ့…ဒီတက်ကသိုလျကွီး နဲ့ ကြှနျမ ပကျသကျမှုအကွောငျးတှကေို ပွနျစဉျးစားကွညျ့မိလိုကျတော့….အမှတျတရတှကေ တကယျကို မြားစှာ..,,နညျးနညျးတော့ ရှညျပါမယျနျော
ကြှနျမက..အဲ့…ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ( Main ) ဆိုတဲ့ ကြောငျးတျောဝနျးကွီးထဲမှာ ဆယျစုနှဈ တဈခုကြျော တိုငျအောငျ ပညာသငျယူ အခြိနျမြားစှာကုနျလှနျခဲ့ဖူးတယျဆိုရငျ….!!ရနျကုနျတက်ကသိုလျ လှိုငျနယျမွေ RC2 ထဲကို ကြှနျမ စရောကျတာ (၁၉၉၄ – ၉၅) ခုနှဈ…ရူပဗဒေ အထူးပွုနဲ့ ပထမနှဈ,ဒုတိယနှဈ အတနျးတှကေို (၂) နှဈတာ တကျရောကျခဲ့ပွီး..ဂုဏျထူးတနျးဝငျခဲ့ပါတယျ..။ အဲဒါကွောငျ့ (၁၉၉၆) ပညာသငျနှဈမှာ ကြှနျမသိပျသှားခငျြတဲ့..ရနျကုနျတက်ကသိုလျ( Main ) ဝနျးထဲကို စတငျခွခြေ ပညာသငျခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ..။အဲ့ဒီမှာ ဂုဏျထူးတနျး ပထမနှဈ ဒုတိယနှဈနဲ့ တတိယနှဈထိ ဆကျတိုကျ တကျပီး (၂၀၀၀) ပွညျ့နှဈမှာကြောငျးပွီးလို့ (၂၀၀၁)ခုနှဈမှာ B.Sc ( Honours ) ဘှဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယျ..
အဲ့ဒီကမှတဆငျ့ (၂၀၀၂)ခုနှဈ မှာ မဟာသိပ်ပံ Master တနျး ပထမနှဈနဲ့ ဒုတိယနှဈ ကိုဆကျတကျခဲ့ပါတယျ.. ။(၂၀၀၃) ခုနှဈမှာ တော့ M.Sc (Engineering) ဘှဲ့ကို ထပျမံယူခဲ့ပါတယျ.. အဲဒါကနေ မကနြေပျသေး သုတသနပွုဖို့ အမှတျမှီလို့ မဟာသုတသေန Research တနျးကို နောကျထပျ တဈနှဈထပျတကျပါတယျ .. ။(၂၀၀၄) ခုနှဈ မှာတော့ M.Res ဘှဲ့ကိုထပျရခဲ့ပါတယျ… အဲ့မှာတငျ ရပျလိုကျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပမေဲ့ မိသားစုကကော သူငယျခငျြးတှကေပါ ပါရဂူဘှဲ့ ဆကျယူဖို့ အခှငျ့အရေးရှိတုနျး ဆကျတကျပါလားလို့ အကွံပွုတိုကျတှနျးကွပါတယျ.. နောကျထပျ (၅ ) နှဈကွီးမြားတောငျ ထပျတကျရမှာကို တှေးကွညျ့မိတော့ … အသကျ(၅) နှဈ မူကွိုထဲက စတကျခဲ့ရတဲ့ကြောငျး ဒီအသကျအရှယျထိ သငျလို့ပဲမကုနျနိုငျ တကျလို့မပီးနိုငျဆိုပွီး ခြီတုံခတြုံနဲ့ အခါခါစဉျးစားခဲ့မိပါတယျ… ။
နောကျဆုံးတော့ ပါရဂူကွို preliminary တနျးကို (၂၀၀၄) ကနေ (၂၀၀၅) ထိ ဆကျလကျတကျရောကျခဲ့ပါတယျ.. ။ အဲ့တနှဈပီးတာနဲ့ နောကျထပျ (၄) နှဈတာ ကာလကတော့…ဒီတက်ကသိုလျကွီးထဲမှာပဲ ဆကျလကျ ပြျောပြျောကွီးပါပဲ.. သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျနဲ့ အတနျးတှတေကျ ..lab တှဝေငျ ..Seminar တှတေကျ..Defense တှထေိုငျ ..project တှလေုပျရငျးနဲ့ပဲ ..နောကျဆုံးတော့ …(၂၀၀၉) ခုနှဈမှာ ပါရဂူဘှဲ့ Ph.Dကိုရရှိခဲ့ပါတယျ..
အဲ့ဒီ့နကေ့တော့ ဘဝမှာ အပြျောဆုံးနတှေ့ထေဲက တနပေ့ါပဲ သူငယျခငျြးတှကေိုဆို ကမြအမွဲ စ နောကျပီးပွောလရှေိ့ပါတယျ ..PhD သာ တကယျပွီးခဲ့ရငျ အဲ့နကြေ့ ငါတကယျ ဂြှမျးထိုးမှာလို့ ..စာတှထေပျသငျ ကြောငျးတှထေပျသှားစရာမလိုဘူး လှတျပီကြှတျပီဆိုပွီး….တကယျတမျးရခဲ့တော့လညျး ဂြှမျးထိုးဖို့မသှေ့ားခဲ့ပါတယျ အခြိနျတှကွောလှနျးလို့ ..ကြောငျးဆိုရငျ အသံတောငျမကွားခငျြတော့လောကျအောငျတကယျဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ..။ အခုတော့လညျး လှမျးမိပွနျတာပါပဲလေ… ။
အထူးသဖွငျ့..ကြှနျမတို့ရဲ့ physics ဆောငျရှေ့ နဲ့သဈပုတျပငျကွီး..ဘှဲ့တှအေခါခါယူရလို့ ကံကောငျးစှာနဲ့ ခဏခဏ ဝငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ convocation hall..copy တှေ ဆှဲရလှနျးလို့ အခါခါသှားခဲ့ရတဲ့ Library ဘေးလမျးက copy ဆိုငျ…ဒူးတုနျတုနျနဲ့ ဖွတျလြှောကျခဲ့ရတဲ့ ဆရာကွီးဒေါကျတာစိနျထှနျးရုံးခနျးရှေ့.. နဲ့ Theartre အခနျး..သူငယျခငျြးတှေ နဲ့ အားတိုငျး အမွဲထိုငျနကွေ chemistry ဆောငျရှကေ့ လမငျးစားသောကျဆိုငျနဲ့ သိပ်ပံ canteen..နာမညျကွီးလို့ သှားလြှောကျခဲ့ဖူးတဲ့ စဈကိုငျးလမျး..လမျးဘယျတော့မှ ဆငျးမလြှောကျဖွဈပဲ ကားနဲ့သာ မောငျးဖွတျဖွဈခဲ့တဲ့ အဓိပတိလမျးအမြားကွီးပါ….
စဉျးစားကွညျ့တော့ လှိုငျနယျမွမှော (၂) နှဈ..ရနျကုနျတက်ကသိုလျ တခုထဲမှာတငျ(၁၃) နှဈ..ကြှနျမရဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူဘဝက စုစုပေါငျး (၁၅) နှဈ အဲ့တော့ အမှတျရစရာ အကွောငျးတရားတှလေညျး မြားစှာ မြားစှာ…..ကြေးဇူးတရားတှလေညျး မြားစှာ…သမိုငျးအစဉျအလာကွီးမားခဲ့တဲ့….ဒီတက်ကသိုလျကွီး …. အခုတော့ နှဈတရာတိုငျခဲ့ပွီ..။
နှဈပေါငျးမြားစှာ ဆကျလကျတညျတံ့အဓှနျ့ရှညျပွီး.. နိုငျငံကိုအကြိုးပွု နိုငျငံကအားထားရမဲ့ နောငျမြိုးဆကျ ပညာတတျသားကောငျးသမီးတှေ အမြားကွီး ဆကျလကျမှေးထုတျပေးနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျးနဲ့ ကြေးဇူးတငျဂါရဝပွုလိုကျပါတယျရှငျ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ Cele Active Worldပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော.။